Vladimir Putin” Ma jirto wax sir ah oo uu Donald Trump nala wadaay - Hablaha Media Network
Vladimir Putin” Ma jirto wax sir ah oo uu Donald Trump nala wadaay
HMN:- Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa soo dhexglay murankii ahaa in uu madaxweyne Donald Trump siiyay sir xaasaasi ah wasiirka arrimaha dibada ee Ruushka markii uu kula kulmay Aqalka Cad.
Putin wuxuu sheey in aaanu Mr Trump wax sir ah fakinin, haddii loo baahdana uu kongareeska Mareykanka la wadaagi karo hadaladii la isdhaafsaday intii uu socday kulanka. Putin waxa uu sheegey d in adka buunbuuniyay hadalladan ay midkood yihiin doqmo ama dad aan daacad ahayn.
Mr Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay inuu Sergei Lavrov la wadaagay ”xaqiiqooyin ku saabsan argagaxisnimada iyo badqabka duulimaadyada”. Waxa uuna sheegay inuu doonayay in Ruushka uu gacan ka gaysto la dagaalanka kooxda la magac baxday dowladda Islaamka.
Waxaa soo laalaabtay eedaymaha ku saabsan in calaaqaad uu dhexmaray ol’olihii doorashada ee Trump iyo Ruushka, waxayna qayb ka tahay baaritaanno dhawr ah oo la wado.